स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंककाे नाफा साढे २ अर्ब - Aarthiknews
सोमबार, २२ असार २०७७ Monday, 06 July, 2020
स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंककाे नाफा साढे २ अर्ब
बुधबार, २९ साउन २०७६
काठमाडौं । स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकले एक वर्षको अवधिमा दुई अर्ब ४९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मूनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथौ त्रैयमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै दुई अर्ब ४९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद आम्दानी गरेको जानकारी दिएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा स्टाण्डर्ड चार्टड बैंकले करिब १४ प्रतिशतले मूनाफा आर्जन गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बै्रक्ले २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमात्रै आम्दानी गरेको थियो ।
अन्य सूचकहरुमा पनि बैंकले राम्रै सुधार गरेको छ । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ६.८३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३ अर्ब २९ करोड ८० लाख हरेकोमा बढेर ३ अर्ब ५२ करोड ३१ लाख पुगेको छ । बैंकले जगेडा कोषमा पाँच अर्ब १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ राखेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंकले ७५ अर्ब ७३ करोड १५ लाख निक्षेप संकलन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा बैंकले ६७ अर्ब छ करोड १० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । निक्षेप संकलन १२.९३ प्रतिशतले बढी हो ।
यस अवधिमा बैंकले कर्जा लगानी ५३ अर्ब ११ करोड एक लाख पुर्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४४ अर्ब ५६ करोड १३ लाख कर्जा लगानी रहेकोमा १९.१८ प्रतिशतले बढेर ५३ अर्ब ११ करोड एक लाख पुर्याएको हो ।
चौतारी र आरम्भको एकिकृत कारोबार आजबाट
सडक विभागका सुपरिटेन्डेन्टको २ करोड ७४ लाख सम्पत्ति
प्रभु बैंकको २८ लाख १० हजार कित्ता संस्थापक शेयर लिलामीमा
माछापुच्छ्रे बैंकका सञ्चालक श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत
सनराइज बैंक र रोयल रेमिटबीच अनलाइन विप्रेषणसम्बन्धि सम्झौता
महँगाे सामान सस्ताेमा नलिनुः प्रहरी
भन्सारबाट १२ वटा भैसी र पाडा कसरी छिरे ?
गोजीमा मास्क राखेर हिँड्नेलाई सय रुपैयाँ जरिवाना
कोरोनाबाट थप एकको मृत्यु, मृतकको संख्या ३५ पुग्यो
महानगरीय अपराध महाशाखा फेरि सर्यो
अब मास्क नलगाई घरबाहिर निस्किए प्रहरीले पक्राउ गर्ने
मौद्रिक नीतिः बिग मर्जरदेखि शाखा घटाउनेसम्मका योजना
२३९ चिकित्सकको चेतावनी, कोरोना भाइरस हावाबाट लामो दूरीसम्म फैलिन सक्छ
उपत्यकामा एकै दिन थप ५४ जनामा कोरोना पुष्टि
तीन पाइलट सहित १४ जना कर्मचारीलाई कोरोना लागेपछि वायु सेवा निगम तनावमा
घटाउन थाले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर, कर्जाको कहिले घट्छ ?
मेलम्चीमा पानी छोड्न नपाउदै यस्तो निर्देशन, तल्लो क्षेत्रमा माछा नमार्नू, पौडी नखेल्नू
अख्तियार प्रवक्तासहित ६३ सह-सचिवको सरुवा, को कहाँ पुगे (सूचीसहित)
बैंकको प्रणाली दुरुपयोग गरेको अभियोगमा मुद्दा